तिब्बत सीमानाबाट सडक खन्ने काम आउँदो फागुनबाट | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
तिब्बत सीमानाबाट सडक खन्ने काम आउँदो फागुनबाट
Published On : २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:३५
गोरखा र चीनको सीमानाका रुइला भञ्ज्याङबाट गोरखातर्फ सडक निर्माणको काम आउँदो फागुनबाट सुरु हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण वस्नेत सहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी हिउँ पर्ने मौसम समाप्त हुनेबित्तिकै सडक निर्माण थाल्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चीनको सीमाबाट प्रोकको नामरुङसम्मको ३५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गर्न यसबर्ष दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । नेपाली सेनाले पनि लार्के भञ्ज्याङसम्म सडकको टूयाक खोल्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले ३५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने भएपछि सेनाले निर्माण गर्ने सडकको दूरी छोटिएको छ ।
गत वर्ष नै रुइला नाकादेखि नामरुङसम्मको सडकको डिपिआर तयार भैसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वस्नेतले बताए । सीमा नाकाको रुइला भञ्ज्याङसम्म चीन सरकारले भने दुई लेनको सडक बनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालको भन्दा तिब्बतको भूगोल कठिन भएपनि सडक निर्माण गरिएको बताउँदै मन्त्री वस्नेतले नेपालतर्फ पनि सहज रुपमा मोटरबाटो खोल्न सकिने बताए । ४ हजार ९ सय ९० मिटर उचाईको रुइला भञ्ज्याङ पुगेको टोलीले तिब्बतको कुन्ताङका जन प्रतिनिधिसँग पनि सडक निर्माणबारे छलफल गरेको थियो ।
डोजर, इन्धन लगायत सडक निर्माणका सामग्री चीनबाट ल्याउनका लागि सहजीकरण गर्ने तिब्बतका अधिकारीहरुले बताएका मन्त्री वस्नेतले जानकारी दिए । रुइलाभञ्ज्याङ चुमनुब्री गाऊँ पालिकाको उपल्लो बस्ती साम्दोबाट करीव ४ घण्टाको पैदल दुरीमा रहेको छ । नुब्री उपत्यकाका बासिन्दा सोही नाका हुदै तिब्बती वजारमा खाद्यान्न खरीद गर्न जाने गरेका छन् ।